နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွန်းဝီနိုင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွန်းဝီနိုင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: မတျ 12, 2019 In: Appointment, State Counsellor, State Counsellor GalleryNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွန်းဝီနိုင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ (၃)နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း ချမှတ်လုပ်ဆောင် သွားမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံနိုင် ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် အာဆီယံမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မည့်ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည့် H.E.Mrs. Suphatra Srimaitreephitak နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား ယင်းနေ့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲတွင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်မှ ရွှေစံအိမ်ဟိုတယ်တွင် အလုပ်သဘောနေ့လည်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။ နေ့လည်စာစားပွဲသို့ နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ထိုငျးနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မစ်စတာ ဒှနျပရာမှနျးဝီနိုငျး ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ထိုငျးနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မစ်စတာ ဒှနျပရာမှနျးဝီနိုငျး ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနမှေ့နျးလှဲ (၃)နာရီတှငျ နိုငျငံခွားရေး ၀နျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး၏ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-ထိုငျး နှဈနိုငျငံအကွား ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့ရေးကိစ်စရပျမြား၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ အလုပျသမားရေးရာကိစ်စရပျမြား၊ ထိုငျးနိုငျငံအနဖွေငျ့ အာဆီယံဥက်ကဋ်ဌ တာဝနျထမျးဆောငျစဉျအတှငျး ခမြှတျလုပျဆောငျ သှားမညျ့လုပျငနျးစဉျမြားနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျမှ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြား ပွနျလညျလကျခံနိုငျ ရေးအတှကျ မွနျမာအစိုးရမှ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ အာဆီယံမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုငျမညျ့ကိစ်စရပျမြားကို ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲသို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီး မြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီးအဖွဈ ခနျ့အပျရနျ သဘောတူညီပွီး ဖွဈသညျ့ H.E.Mrs. Suphatra Srimaitreephitak နှငျ့ ထိုငျးနိုငျငံမှ ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့ဝငျမြားတကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
ထိုငျးနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအား ယငျးနမှေ့နျးလှဲ ၁၂ နာရီခှဲတှငျ အပွညျပွညျ ဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျမှ ရှစေံအိမျဟိုတယျတှငျ အလုပျသဘောနလေ့ညျစာဖွငျ့ တညျခငျးဧညျ့ခံခဲ့သညျ။ နလေ့ညျစာစားပှဲသို့ နိုငျငံတျောတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ့ဆှလေညျး တကျရောကျခဲ့သညျ။